Tababare Pep Guardiola Oo Durba Bilaabay Inuu Ciyaar Maskaxeed Isticmaalo Ka Hor Kulanka Ay Anfield Ku Booqanayaan Liverpool | Laacib.net
November 4, 2019 Abdirashid Mohamud "SHarDinHO" Comments Off on Tababare Pep Guardiola Oo Durba Bilaabay Inuu Ciyaar Maskaxeed Isticmaalo Ka Hor Kulanka Ay Anfield Ku Booqanayaan Liverpool
Pep Guardiola ma doonayo inuu wakhti iska lumiyo, durbana wuxuu bilaabay inuu isticmaalo ciyaar maskaxeedkii lagu xaman jiray marka uu kulan weyn kusoo fool leeyahay, ka hor kulanka Anfield ayuuna hadal sii tuuray isagoo kaga dan leh iney hadal heyntu badato.
Macalinka difaacanaya horyaalka ayaa u sheegay kooxdiisa iney qasab ku tahay guul ay kusoo gaaraan garoonka Anfield hadiiba ay doonayaan iney tartankooda horyaalka nooleeyaan, sidoo kalana wuxuu ka hor ciyaarta toosh kusii ifiyay Sadio Mane oo kaar jaale lagu siiay kulankii Aston Villa inuu xerada ganaaxa isku tuuray.
Sanadkaan loolanka waa adag yahay, Liverpool waa kooxda kaliya oo aan ilaa iyo haddan aan laga adkaan kulamada horyaalka, sidoo kalana kooxda difaacaneysa horyaalka waxye raadineysaa iney guul kusoo gaarto Anfield tan iyo 2003.
Guardiola jiif uma yaalo marka uu kulamada nuucaan ah leeyahay, wuxuuna doonayaa inuu guul kusoo gaaro guriga aysan jecleyn koox walba iney booqato.
“Waxaan dooneynaa inaan isku dayno, balse uma maleynaayo, immisa qarni ayeysan ku lumin gurigooda Anfield?” ayuu yiri Guardiola mar la weydiiyay hadii uu Klopp kusoo garaaci karo Anfield.
“Waan arki doonaa, hadda waxaan aadeynaa Italy si aan ula ciyaarno Atalanta, marka aan soo laabano waxaan aadeynaa Anfield”
“Waxyaaba badan ayaa dhacaya, kulamo badan ayeyna tahay in la ciyaaro”
Si kastaba Guardiola wuxuu qiray inuusan ogeyn hadii uu kusoo adkaanayo Anfield, waana mid ka mid ah hadalada loo arkay iney yahiin ciyaar maskaxeedka uu adeegsanayo ka hor kulanka labada kooxood.